/ब्लग/ग्यालरी/DECA पाउडर - परम गाइड कसरी गर्ने Nandrolone Decanoate (Durabolin)
प्रकाशित 05 / 30 / 2019 by Dr. Patrick Young मा लेखियो ग्यालरी.
के हो Nandrolone Decanoate(डीईसीए)
आज, धेरै बासिन्दाहरूले आफ्नो मांसपेशी जन को बढावा गर्न को लागि स्टेरियोड्स को होमबाउ को रुचि गर्छन। Nandrolone Decanoate, DECA को रूप मा जानिन्छ, ब्रान्ड नाम DECA-Durabolin को तहत बेचे, एक शक्तिशाली स्टेरॉयड मध्ये एक छ जो सही घर ले जाने जब शानदार परिणाम दिछन। यदि तपाईं उद्योगमा नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाईं डिसा Durabolin कुन सोच र सोच्न सक्छ कि यो तपाईंको लागि के गर्न सक्छ। यहाँ केही Nandrolone Decanoate (DECA) विशेषताहरू छन् जुन यसलाई अन्यबाट अलग राख्छन्।
नान्ड्रोलेन डेनानो (DECA) एक ढिलो अभिनय स्टेरॉइड हो, र यसले यसलाई अझ लोकप्रिय बनाउँछ। स्वर स्टेरॉइड प्रयोग गर्ने फाइदा के हो? लामो आधा जीवन, लामो समय यसले शरीर छोड्ने स्टेरॉइडको लागि लिन्छ। साथै, यो अर्थ नन्द्रोलोन डेकोनोरेट खुराक लगातार बारम्बार छैन। तपाईं केवल तीन हप्ता पछि इंजेक्शन प्राप्त गर्नु पर्छ, अरूको विपरीत जुन तपाईले जेब साप्ताहिक प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ।
न्यान्ड्रोलोन डिकोनोनेट (डीईसीए) (360-70-3) पनि केहि साइड इफेक्ट्स को विशेषता हो, यो उनलाई प्यार गर्दछ जसलाई उनको स्वास्थ्य को राम्रो हेरविचार ले प्यार गर्दछ। कम गम्भीर साइड इफेक्टहरू छन् किनभने यसले कम रूपमा एस्ट्रोजेनमा परिवर्तन गर्छ।
को प्रभाव बडिबिल्डिङमा नन्द्रोलोन डिकोनोनेट
पुन: सुधार गर्नुहोस्
- संयुक्त स्वास्थ्य सुधार गर्नुहोस्
- दुबला मांसपेशिहरु मा ठूलो मात्रा मा वृद्धि
पुनःप्राप्ति सुधार गर्नुहोस्
कहिले व्यायामशालामा सहभागी भयो र तपाईंको अन्तिम कामबाट बाहिर थकानको कारणले कुनै शारीरिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकेन? न्यान्ड्रोलोन डेनोनोको प्रयोग पछि, तपाईं ध्यान दिनुहुनेछ कि तपाइँ अघिल्लो व्यायामबाट पुनःप्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को पटक अझ राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नुहुनेछ।
संयुक्त स्वास्थ्य सुधार गर्नुहोस्
न्यान्ड्रोलोन डेनानोटको प्रयोगको साथ थप संयुक्त दुखाइको कारणले यो सुनिश्चित गर्दछ कि तिनीहरू सधैं राम्रो स्वास्थ्यमा छन्।
पर्याप्त शक्ति बिना, तपाईंको शरीर निर्माण गर्ने लक्ष्य बेकार हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईंले बल पाउनुभयो भने, तपाईं ठूलो वजन उठाउन सक्नुहुन्छ यसैले अधिक मांसपेशिहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नन्द्रोलोन डेनोनो पाउडर आफ्नो बल बढ्छ, तपाईं शिखर शक्ति मा वजन हिट गर्न अनुमति दिन्छ।
दुबई मांसपेशिहरु मा ठूलो मात्रा मा वृद्धि
Nandrolone Decanoate उल्लेखनीय मांसपेशिहरु को निर्माण क्षमताओं छ, र राम्रो कुरा यो मात्र मा भन्छन् पातलो मांशपेसी ठूलो।
प्रदर्शन सुधार गर्नुहोस्
के तपाइँ आफ्नो workouts बकाया बनाउन आवश्यक छ? नान्ड्रोण्डोन डेनानोटको प्रयोगले तपाईंको जिम सत्र अझ बढी उत्पादक बनाउन मद्दत पुर्याउँछ, तपाईले कम से कम समयको भित्र तपाईलाई उत्साह गर्नु भएको छ।
Nandrolone Decanoate (DECA) कसरी बनाउने
चरण 1: बेकरमा नान्ड्रोड्रोन डेनानोट पाउडर वजन।
चरण 2: बीए र बीबी थप्नुहोस्।
चरण 3: साल्वन्ट पाउडर मा भंग गर्न सुरु। प्रक्रियालाई गति दिनको लागि धीरज मिश्रण हल गर्नुहोस्।
चरण 4: समाधानमा तिलको तेल जोड्नुहोस् र यसलाई राम्रोसँग हल गर्नुहोस्।
चरण 5: सिरिन्जमा न्यानो भएको समाधान कोर्नुहोस् जुन सिरिङ फिल्टरमा सुई फिल्टर र संलग्न गर्न प्रयोग गरिनेछ।
चरण 6: कन्टेनर थिच्नुहोस्
तपाईंलाई तयार पार्न रसायनहरू
DECA 50ml प्रत्येक 200mg / मिलीलीटरको लागि नान्ड्रोलेन डेनोनो पकाउने
10grams नन्द्रोलोन डेनोनो पाउडर
32.50ml तिलको तेल (मोटो तेल देखि बचाउनुहोस् र जुन तपाई एलर्जी हुन सक्नुहुनेछ)।
2.5 ब्यानिन्स अल्कोहल 5% (तपाईले गरेको कुनै पनि रूपान्तरणका लागी 5% बी भन्दा बढी हुनुहुन्न)
7.50ml बेंजिल बान्जेट 15%
उपकरण आवाश्यक छ
Nandrolone Decanoate कसरी ब्रेक गर्ने कदम दिशानिर्देशहरू द्वारा चरण
चरण 1: बेकरमा नान्ड्रोलोन डेनोनो पाउडर वजन गर्नुहोस्।
यो कागजको टुक्रा लिनु, यसलाई मापनमा राख्नु र कम थिच्नु हो कि कागजको वजन समावेश गर्दा तपाईंको पाउडर को मापने को लागी। आफ्नो पाउडर बिट बिट बिर्सनुहोस् ताकि तपाईलाई तपाइँको पाउडरको वजन बढाउनु पछि स्कूपिंग राख्न छैन। तपाईं सही हो भनेर सुनिश्चित गर्न, एक व्यास प्राप्त गर्नुहोस् जुन ग्याम्मेमा एकदम सही छ। एक पटक तपाईंले दस ग्राम पाउनुभयो भने तपाई अहिले राम्रो हुनुहुन्छ।
चरण 2: बीए र बी बी थप्नुहोस्।
चरण 3: हलव पाउडर मा भंग गर्न सुरु। प्रक्रियालाई गति दिनको लागि धीरज मिश्रण हल गर्नुहोस्।
तपाईं यसलाई जल छिटो बनाउन पानीको स्नान प्रयोग गरेर समाधानलाई हटाउन सक्नुहुनेछ। तिमी त्यो कसरी गर्छौ? केहि पानी संग एक बर्तन लिनुहोस् र यसलाई स्टोवमा राख्नुहोस्। हल युक्त बियर प्राप्त गर्नुहोस् र यसलाई पानीमा केहि सेन्टिमिटर राख्नुहोस्। तपाईं केतलीबाट न्यानो पानी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै पानीको पानी नदिनुहोस् किनभने यसले अक्सिजनको नेतृत्व गर्दछ जुन यस प्रक्रियाको साथ हस्तक्षेप गर्दछ।
चरण 4: तिल तेलको समाधानमा जोड्नुहोस् र यसलाई राम्रो तरिकाले हल गर्नुहोस्।
तिल तेलले उचाईको समाधानको रूपमा समाधान गर्न समाधानको रूपमा समाधान गर्न सक्दछ। कुनै पनि हार्मोन swirls को लागि जाँच गर्न सक्छ र निस्पंदन प्रक्रियामा जान अघि कुनै पनि छैन भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्।
चरण 5: तातो लगाइएको समाधान कोर्नुहोस् सिरिंजमा जुन फिल्टर गर्न प्रयोग गरिन्छ र सुईलाई फिल्टरमा सुई संलग्न गर्दछ।
सिरिंजमा केही दबाब प्रयोग गर्न समाधान गर्न को लागी नयाँ फिल्टरसँग प्रतिस्थापन गर्न र प्रतिस्थापन गर्न जब तपाईंलाई सूचना छ कि प्रक्रिया ढिलो हुँदैछ।
चरण 6: कंटेनर कैप गर्नुहोस्
एक पटक तपाईं निलम्बन प्रक्रियाको साथ भएपछि, समाधान अब प्रयोगको लागि तयार छ। प्रदूषणबाट बचाउन कंटेनरलाई टोप गर्नुहोस्।
जब यो स्टेरियोड्स लिन आउछ, त्यहाँ दुई प्रकारका व्यक्तिहरू छन्; जो कि बिक्री को लागी नैन्ड्रोलोन डेकोनोरेट किन् र जो कि कच्चे नान्ड्रोड्रोन डेनोनो देखि घर को पकाने को रुचि हो। दुवै प्रयोग गरेर, त्यहाँ एक मात्र लक्ष्य हो; राम्रो खोजी गर्ने शरीर सिर्जना गर्न।
यदि तपाईले घरलाई स्टेरॉइड आफैलाई पकाउन सक्नुहुनेछ भने, तपाइँ कम से कम यो सही तरिका गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। दिइएका Nandrolone Decanoate Recipe पछ्याउँदै डेसा कसरी बनाउने, तपाईं प्राय: सबै भन्दा राम्रो परिणाम पाउनुहुनेछ। अगाडि बढ्नु वा सावधानी वा कम मात्राको प्रयोग गरी नन्द्रोलोन डेनोनो पाउडर तपाईंको स्टेरॉयडको गुणलाई असर पार्न सक्छ।
वास्तव मा, सही उपकरण र अवयव संग, तपाईं आरामपूर्वक Nandrolone Decanoate homebrew र आफ्नो शरीर सौष्ठव क्षमता को एहसास गर्न सक्छन्।
नन्द्रोलोन डिकोनोनेट, जीजे ब्लकडिज, सिर्जनास्पेस स्वतन्त्र प्रकाशन प्लेटफार्म, 2018, पृष्ठ 1-170
Anabolic स्टेरियोड र एथलीट- 2D एड, विलियम एन। टेलर। एमडी, पृष्ठ 39
औषधि, एथलेट, र शारीरिक प्रदर्शन, जॉन ए थॉमस द्वारा संपादित, पृष्ठ 27-30
Trenbolone Enanthate पाउडर 2019 मिश्रण गर्न Trenbololone Recipe कसरी प्रयोग गर्ने 10 सबैभन्दा लोकप्रिय Anabolic स्टेरॉयड कच्चे माल